Global Voices teny Malagasy » Fomba Mahavariana Hitan’ireo Filipiana Hanamboarana Harato Filalaovana Basketball · Global Voices teny Malagasy » Print
Fomba Mahavariana Hitan'ireo Filipiana Hanamboarana Harato Filalaovana Basketball
Voadika ny 13 Septambra 2016 11:39 GMT 1	 · Mpanoratra Mong Palatino Nandika avylavitra
Sokajy: Azia Atsinanana, Filipina, Fanatanjahantena, Mediam-bahoaka, Tanora, Tsidika, Zavakanto & Kolontsaina
Sary an'i Richard Daniels, fampiasàna nahazoana alàlana.
Liana te-hahafantatra misimisy kokoa momba ny lazan'ny lalao Basket ao Filipina, nandany ny dimy taona farany teo i Richard Daniels nakàny sary ireo harato filalaovana basket  tany amin'ireo faritra ambanivohitr'io firenena io.
Ny basketball no fanatanjahantena isan'ny malaza indrindra ao Filipina. Na eo aza ny tsy fahampian'ny fotodrafitrasa hanaovana fanatanjahantena ao amin'ilay firenena, nahita fomba mahavariana hananganana harato hilalaovany basketball ry zareo Filipiana any amin'ireo faritra samihafa tsy eritreretina mihitsy, toy ireo toerana sy arabe haolo.
Raha nanontaniana momba izay nanosika azy hanomboka io tetikasa fandraketana io, nolazain'i Daniels tamin'ny Global Voices fa nanaitra azy ny lazan'ny lalao basket ao Filipina, indrindra fa any amin'ireo faritra ambanivohitra:
Amin'ny maha-lehilahy Anglisy sy mpankafy lalao ‘soccer’ ahy, somary nampiasa saina ahy ihany ny antony mampalaza be ny basket eto raha oharina amin'ny lalao baolina kitra, izay goavana manerana izao tontolo izao. Ny andrana sary nataoko dia nanomboka tamin'ny endrika fijerena bebe kokoa ny fitiavan'ireo Filipiana ny basket miohatra amin'ny fanipàzana ara-bakiteny any anaty harato. Somary liana bebe kokoa tamin'ny endrika ivelany aho ary ny kolontsaina niaingàn'ny kianja sy ny harato tany amin'ireo vohitra mahantra, fa tsy ireo toeram-pilalaovana mahazatra any amin'ireo faritra somary manamorona ny tanàndehibe.
Sary an'i Richard Daniels, fampiasàna nahazoana alàlana
Nolazain'i Daniels fa zendana izy nahita ny fomba filalaovana basket nasehon'ny ankamaroan'ny olona any amin'ireo faritra ambanivohitra :
Antenaiko izay rehetra mahita ny tetikasako mba ho afaka mahatakatra ny hoe hatraiza ny fitiavan'ilay firenena ny lalao basket ary toy inona no halalin'ny fàkan'ilay fanatanjahantena ao anatin'ny kolontsaina ao an-toerana. Nahita harato maro aho nandritra ilay tetikasa, fa mbola mahazendana ahy hatrany ny mahita ireny kianja vonjimaika manerana ny tanàna ireny, sy ireo olona amin'ny sokajin-taona rehetra – indraindray manao tong (kapa fingotra) fotsiny.
Ny sary tena ankafizin'i Daniels manokana dia ilay nalaina fony teo am-panadiovana tany iray hovolena ireo tantsaha sasany :
Ny sary ankafiziko dia ilay kianja iray filalaovna basket mitovy amin'ny hoe nalaina avy any anatin'ireo Sarimihetsika Mad Max. Toy ny hoe narafitra avy amin'ny taolana ireo fotodrafitrasa! Ary koa rehefa naka ilay sary aho, nirehitra ireo toerana fambolena satria teny an-toerana nandio ny faritra hovolena ireo tantsaha. Heveriko fa io ilay antsoina hoe tavy fanao ho fambolena. Tena sary iray tsara tifitra izay.
Antenain'i Daniels ny hahita bebe kokoa sarinà harato filalaovana basket any amin'ireo faritra sasany ao amin'ny firenena. Mandritra izany fotoana izany, ireto ambany ireto ny sasany amin'ireo sary nalain'i Daniels, izay maneho ny fifikirana sy ny fahaizamamorona ananan'ireo Filipiana izay maniry fatratra ny hilalao basket.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/09/13/88370/
 harato filalaovana basket: http://www.richardjamesdaniels.com/basketball